‎Burmese Morning Broadcast on Apple Podcasts
Up-to-date news and current affairs in Burmese covering domestic and international news stories. Our coverage aims to reflect diverse opinions and offers in-depth analysis.
Burmese Morning Broadcast BBC
ကယားမှာတင် စစ်ဘေးဒုက္ခသည် သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ ကုလအဖွဲ့ပြော
သောကြာ မနက်ခင်း သတင်းများ (၂၅ ဇွန်လ ၂၀၂၁)
စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲ ကြုံလာရတဲ့ ဒုက္ခသည်အရေး
-	အာဏာသိမ်းပြီး ၅ လတာအတွင်း ကယားအပါအဝင် မြန်မာပြည် အရှေ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာ စစ်ဘေးဒုက္ခသည် ၁၇၇,၅၀၀ ဝန်းကျင် ရှိလာ
-	ကုလအဖွဲ့ ယူအဲန်အိုချာ (UNOCHA) ထုတ်ပြန်ချက်အရ ချင်းမှာလည်း ဘေးလွတ်ရာ ထွက်ပြေးကြရတဲ့ လူပေါင်း နှစ်သောင်းကျော်ဟာ ယာယီစခန်း ၁၀၀ ကျော်မှာ ခိုလှုံနေကြရ
-	အာဏာသိမ်းဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြပွဲတွေထဲ ပါခဲ့လို့ စစ်ကောင်စီရဲ့ ရန်ပြုခံရမှာ ကြောက်ပြီး စက်ရုံကို အလုပ်လာမဆင်းတဲ့ မြန်မာ အထည်ချုပ် အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်မဖြုတ်ဖို့ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတွေက လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ညွှန်ကြား
-	အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီအပေါ် ပိတ်ဆို့ အရေးယူတာတွေ မလုပ်တဲ့ ဩစတြေးလျ ဝန်ကြီးချုပ် မော်ရစ်ဆင်အစိုးရကို သူ့ရဲ့ လေဘာပါတီ အပါအဝင် ပါတီစုံ ပါလီမန်အမတ်တွေ ဖိအားပေး
-	ဩစတြေးလျထဲ ဆက်နေထိုင်လိုတဲ့ မြန်မာတွေကို အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့် ပေးဖို့လည်း ပါလီမန်အမတ်တွေ ဆော်ဩ
-	အမေရိကန် နာမည်ကျော် ကမ်းခြေ မိုင်ယာမီမြို့မှာ ၁၂ထပ်တိုက်ဟောင်း ပြိုကျလို့ လက်တင်အနွယ် အများစု လူပေါင်း ၉၉ ယောက်ထိ ပျောက်ဆုံးနေ၊ လူရာချီ အင်အားသုံး ကယ်ဆယ်ရေးတွေလုပ်ပြီး အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာ
-	ကနေဒါမှာ ဌာနေမျိုးနွယ်စုဝင် ကလေးအများစု ဖြစ်တဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေ ရာပေါင်းများစွာ မြှုပ်ထားတဲ့ ကျင်းတွေ တစ်လအတွင်း နှစ်ကြိမ်မြောက် တွေ့လာရ
-	ဌာနေမျိုးနွယ်စုကလေးတွေကို ယဥ်ကျေးအောင်ဆိုပြီး မိသားစုနဲ့ခွဲထားခဲ့တဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ကနေဒါသမိုင်းကနေ သင်ခန်းစာယူကြဖို့ ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် ထရူးဒိုးပြောဆို
-	မြန်မာပြည်ထဲက ကိုဗစ် တတိယလှိုင်းကို လန့်ပြီး တရုတ်အာဏာပိုင်တွေက ရှမ်းမြောက်ပိုင်း ရောက်နေ
- နေရာတကာတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်တာမို့ လူထု အနေနဲ့ စစ်သတင်းတွေ အမြဲနားစွင့်ထားဖို့ KIA ပြောကြား
- မကွေးက ဂန့်ဂေါမှာ ကိုဗစ်ပိုးတွေ့မှု မြင့်တက်နေသလို ပဲခူးက မင်းလှ၊ ဖြူး၊ လက်ပံတန်းမှာ ပိုးတွေ့မှုတိုး
- ကိုဗစ် ဒုတိယလှိုင်းစတင်ရာ ရခိုင်မှာလည်း တရက်အတွင်း ၆ဦးပိုးတွေ့ ၊ အကျဥ်းသား ပိုးတွေ့မှုတွေ ရှိလာ
- လူမှုကွန်ယက်ပေါ် လက်ခလယ်ထောင်ပြတဲ့ပုံတင်မိလို့ ကျောင်းကအရေးယူတဲ့အမှု ကန်တရားရုံးချုပ်က ပယ်ချ
- ကိုဗစ် ကူးစက်မှု မရှိဘူးလို့ ပြောတဲ့ မြောက်ကိုရီးယားမှာ ကျောင်းတွေမှာ ကူးစက်မှုမရှိအောင် လုပ်ဆောင်နေ
- ယူရို ဘောလုံးပွဲတွေမှာ ဘယ်အသင်းတွေ ရှုံးထွက်တက်သွားပြီလဲ ဆိုတာ အပါအ၀င် ကြာသပတေး မနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ယူကျုတို့မှာ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
မနက်ပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625862
ညပိုင်း ပေါ့ဒ်ကတ်စ် ရယူရန် - https://www.bbc.com/burmese/media-45625858
ဝက်ဘ်ဆိုက် - https://www.bbcburmese.com
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် - https://www.facebook.com/BBCnewsBurmese
အင်စတာဂရမ် - https://www.instagram.com/bbcburmese/
ယူကျု - http://youtube.com/thebbcburmese
- ထောင်ကျနေတဲ့ အမျိုးသားရေးဆရာတော် ဦး၀ီရသူ ဘယ်မှာလဲ
- မန္တလေးက မနေ့က ပစ်ခတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ စစ်ရေးတင်းမာလာမှာကို အမေရိကန်က စိုးရိမ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်
- ပြင်သစ်ကတော့ အာစီယံ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သဘောတူထားတဲ့ အချက်၅ချက် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ပြော
- ၅လနီးပါးရှိ လာပြီ ဖြစ်တဲ့ အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါ၀င်သူ ပညာရေး၀န်ထမ်းတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲ
- ရခိုင်မှာ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး အန္တရာယ် ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ
- အိန္ဒိက ကိုဗစ် မျိုးကွဲ Dealta Plus ဟာ ကူးစက်နှုန်းမြန်ပြီးကာကွယ်ဆေး လဲ အပြည့်အ၀ မကာကွယ်နိုင်ဘူးလို့ ဆေးသုတေသီပြော
- စကော့တလန် ရှုံးပွဲ ရင်ဆိုင်ရပေမယ့် အင်္ဂလန်ကတော့ အနိုင်ဂိုးကြောင့် ရှုံးထွက်ပွဲ အဆင့်ကို တက်လှမ်းသွားတဲ့ ဘောလုံးသတင်း အပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဟူး မနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ယူကျုတို့မှာ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
နေပြည်တော် မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှာ သံဃာအပါး ၂၈၀ အနက် ၇၂ပါး ပိုးတွေ့ လော့ခ်ဒေါင်းချ
- အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ရုရှားကိုဒု-အကြိမ်သွားခဲ့တဲ့ စစ်ကောင်စီဥက္ကဌ သမ္မတ ပူတင်နဲ့ တွေ့ခွင့်မရ
- ယူကေက မြန်မာ အာဏာသိမ်း စစ်တပ်နဲ့ ဆက်နွယ် ကုမ္ပဏီတွေကို ၆ကြိမ်မြောက် အရေးယူ
- ရွေးကောက်ခံ အစိုးရဆီက မတရားအာဏာရယူပြီး တိုင်းပြည် ကမောက်ကမဖြစ်အောင် လုပ်တယ် ဆိုကာ
မြန်မာစစ်ကောင်စီ ကို ဥရောပ သမဂ္ဂကလည်း ထပ်မံ အရေးယူ
- စစ်ကောင်စီ လက်ထက် အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေ ပိတ်သိမ်းမှုနဲ့ အတူ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးပျောက်ကွယ်
- မြန်မာ ပဲတီစိမ်း၊ မတ်ပဲနဲ့ ပဲစင်းငုံ ကို အကန့်အသတ်မရှိ တင်သွင်းဖို့ အိန္ဒိယအစိုးရက ပြန်လည်ခွင့်ပြု
- ခြင်္သေ့လေး ဆိုက်ကီက ယူရိုဖလား ဘောလုံးပွဲတွေကို ဘယ်လို ခန့်မှန်းပေးနေသလဲ
- နယ်သာလန် ၊ ဒိန်းမတ် နဲ့ ဘယ်လဂျီယန် တို့ရဲ့ အနိုင်ပွဲ ဘောလုံးသတင်း အပါအ၀င် အင်္ဂါ မနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ မြန်မာနဲ့ နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ ပေါ့ဒ်ကတ်စ်၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ ယူကျုတို့မှာ တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
-	အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် မော်စကိုမှာ ရောက်နေ
-	ရုရှား ကာကွယ်ရေးဌာနက ကျင်းပတဲ့ နိုင်ငံတကာ လုံခြုံရေး ညီလာခံကို တက်မယ်၊ ၉ ကြိမ်မြောက် မော်စကို ကွန်ဖရင့် မနက်ဖြန်ကနေ စပြီး ၃ ရက် ကျင်းပမှာဖြစ်
-	အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ သမ္မတို့ရဲ့ ဒီကနေ့ တနင်္လာနေ့ နေပြည်တော်ရုံးချိန်းမှာ ဘာတွေဖြစ်မလဲ၊ အတိုင်ပင်ခံရဲ့ ရှေ့နေနဲ့ ဘီဘီစီမေးမြန်းခန်း
-	စစ်ဘေးရှောင်တွေဆီ ကယ်ဆယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ ဖွင့်ပေးဖို့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပန်ကြား
-	လူအများ ခိုလှုံရာ ဘာသာရေး နေရာဌာနတွေ၊ ဆေးရုံနဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေကို လေးစားဖို့လည်း ပုပ်ဖရန်စစ် ထပ်လောင်း တောင်းဆို
-	မြန်မာပြည်ထဲက ကိုဗစ် တတိယလှိုင်း၊ ရန်ကုန် နာမည်ကြီး အစိုးရကျောင်း TTC နဲ့ ဒဂုံ ၁ က ကလေးတွေ အပါအဝင် ကလေး ၅ ယောက် ကိုဗစ်ပိုး တွေ့လို့ ဝေဘာဂီမှာ တင်ထားရ၊ ရခိုင် မောင်တောမှာလည်း ၂ ယောက် ထပ်တွေ့ .... စတဲ့ စစ်အာဏာသိမ်းမှု နောက်ဆက်တွဲ အကြောင်းတွေကို အထူး တင်ဆက်ထားတဲ့ နောက်ဆုံးရ သတင်းတွေကို ရှုစားနားဆင်နိုင်ပါပြီ။
#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #မနက်ခင်းသတင်း #ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
Global flower protests to mark Daw Suu’s 76th Birthday
Zau Gun, Karing , 06/20/2020
သတင်အး သစ်တွေက3weeks လောက်နောက်ကျနေတယ်
Lolabet Lin , 03/22/2021
သတင်းက တစ်ရက်နောက်ကျနေတယ် update လေးဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်
Cin Tun , 04/13/2020
Good tools for us.